I-Masterbatch Factory-China Masterbatch Manufacturers, Suppliers
Sinikezela ngee-mono-masterbatches ukuhlangabezana neemfuno zabathengi zokusasazeka okuphezulu, ukuzinza kombala kunye nothuli.
Imibala: Ebomvu, eBlue, etyheli, eluhlaza, eViolet, njl.
Izicelo : I-injection Molding, i-Blow Molding, i-Extrusion, i-Blow Film, i-Sheet, i-PP filament, i-PP Staple fiber kunye ne-BCF Yarn, i-Non-wovens njl.
Inzuzo encinci yeshishini ibandakanya:
● Njengokutshintshwa kwemibala yomgubo ukuqinisekisa ukusebenza ngokungenathuli kunye nokuphatha ngokulula.
● Ukunciphisa amaxesha okucoca phakathi kweebhetshi eziqinisekisa ukusebenza kakuhle kwemveliso kunye nenkcitho encinci.
● Iimpawu zayo ezisasazwe kwangaphambili zifumana ukufaneleka kwayo kwimveliso ye-Mono-Filaments, iFilimu encinci, i-Tailor-made masterbatch kunye neekhompawundi.
I-JC2020B isetyenziselwa amalaphu angalukiweyo anyibilikayo, kunye ne-SMMS, i-SMS, njl. izixhobo zokuhluza, izinto zokuthambisa i-thermal, izinto zokufunxa ioyile kunye nesahlukanisi sebhetri, njl.
Isetyenziselwa ukufezekisa ukusebenza kakuhle kwesihluzi se-meltblow engalukwanga, eye-FFP2 yeemaski zobuso eziqhelekileyo (kunye nokuhluzwa okungaphezulu kwe-94%).
I-JC2020 isetyenziselwa ukunyusa umthamo we-adsorption weentlawulo zombane kwi-meltblow non-wovens.
Inceda ukomeleza isiphumo sokucoca ngokubanzi kunye nokubola kwe-thermal ye-meltblow non-wovens xa ikwi-finess esemgangathweni kunye nobunzima begram.
Izibonelelo zayo kukuba inceda ukunyusa ukusebenza kokucoca ukuya kwi-95% kunye nokulunga kwefiber esemgangathweni kunye negrama.Kwakhona, ayilungcoliseko kwaye ayinabungozi koomatshini.
I-JC7010 yenziwe nge-resin efunxa amanzi, i-polypropylene kunye nezinye izinto ze-hydrophilic.Kunconywa ukuvelisa ilaphu elingalukwanga kunye nomsebenzi we-hydrophilic onokuthatha indawo emva kokugqiba ukusetyenzwa.
Iinzuzo ze-JC7010 kukuba, inomsebenzi ogqwesileyo kunye nesigxina se-hydrophilic, i-non-toxic, i-antistatic effect enkulu kunye ne-dispersability enhle.
I-Flame Retardant Masterbatch
I-JC5050G yi-masterbatch elungisiweyo eyenziwe kwi-arhente ekhethekileyo ye-flame retardant kunye ne-polypropylene kunye nezinye izinto.Isetyenziselwa ukuvelisa i-PP fiber kunye ne-non-wovens, efana ne-BCF yarn, intambo, i-car textile kunye nelaphu lomkhusane njl.
I-PP i-filament kunye ne-staple fiber, i-PP engalukiweyo ilaphu;
Iimveliso zonxibelelwano, izixhobo zombane, izinto zombane, izixhobo ezingangenwa luqhushumbo emgodini, iinxalenye zemoto, izixhobo zonyango, izixhobo zombane zasekhaya kunye nemathiriyeli engatshiyo elabhu, njl.njl.
I-Softening masterbatches i-JC5068B Seires kunye ne-JC5070 zi-masterbatch ezilungisiweyo ezenziwe kwizinto ezisemgangathweni ophezulu kunye nezongezo ezithambileyo zodidi oluphezulu, ezifana neepolima, i-elastomer kunye ne-amide.Isetyenziswe ngokubanzi ngamashishini angengomlukwa wehlabathi.Ii-masterbatches ezithambileyo zenza umphezulu wemveliso yome, akukho greasy.
Zingasetyenziswa kwizicelo ezifana nempahla yokukhusela, iimpahla zotyando, iitafile zokusebenza kunye neebhedi ezinelaphu, i-napkins, i-diaper kunye nezinye iimveliso ezinxulumene nazo.
Zombini i-JC5068B kunye ne-JC5070 zihambelana kakuhle kunye nezinto ze-matrix kwaye azitshintshi umbala wezinto ze-matrix.
Zilula ukuzisebenzisa, i-masterbatch kunye ne-PP impahla inokuxutywa ngokuthe ngqo kwi-premixed ukufumana i-dispersion effect.
Kuluhlu olucetyiswayo lomlinganiselo wedosi/yehlisela phantsi, isiphumo sokuthambisa kwi non-wovens sibonakala ngakumbi.
Izixhobo zokuvelisa ezifunekayo azikho iimfuno ezikhethekileyo, zicela kuphela ukulungiswa okulula kweemeko zenkqubo yokuvelisa (ikakhulukazi ukushisa ukushisa).
I-JC5055B yi-masterbatch elungisiweyo equlethe i-agent egqwesileyo ye-anti-static kunye ne-polypropylene resin kunye nezinye izinto.Isetyenziselwa ukuphucula isiphumo se-antistatic yeemveliso zokugqibela ngaphandle kokucutshungulwa ukomisa okongeziweyo.
I-advanteji ye-JC5055B inokusebenza kakuhle kwi-antistatic enokufikelela kwi-108 Ω ngokwedosi efanelekileyo, engeyotyhefu, kunye ne-dispersibility enkulu.